Atụmatụ 4 iji gbanwee kichin nke ụlọ maka mgbazinye | Bezzia
Atụmatụ 4 iji gbanwee kichin nke ụlọ maka mgbazinye
Ibi n'ụlọ a na -akwụ ụgwọ ekwesịghị ime ka ị kwụsị inwe mmetụta nke gị. Ọ dịghị mkpa ịbanye na saịtị iwu ime oghere ọ bụghị naanị ịrụ ọrụ nke ọma, kamakwa ọ mara mma karịa. Ọ bụrụ na ọ bụ ebe ngafe ọ bụ ihe ezi uche dị na ị chọghị itinye ego na ya nke ukwuu, mana enwere atụmatụ dị mfe nke nwere ike inyere gị aka ịgbanwe kichin.
Enwere atụmatụ dị mfe ga -enyere gị aka ịgbanwe kichin nke ụlọ maka mgbazinye na -enweghị ọrụ. Maka ụfọdụ n'ime ha, ị ga -enwerịrị ikikere nke ndị nwe ya mana n'ihe gbasara naanị okwu aesthetic na reversible, Maka akụkụ ka ukwuu, anyị echeghị na ị ga -ahụ mmegide.
Na ụlọ anyị bi n'ime ya bụ arụ ọrụ na mma ọ dị nnukwu mkpa na ahụike anyị. Kichin bụ otu n'ime oghere dị mkpa n'ụlọ, ọ bụ ya mere ọ bụ nke mbụ ọtụtụ n'ime anyị na -arọ nrọ ịrụzigharị. Ma mgbe anyị na -ekwu maka nrụzigharị, anyị anaghị ekwu maka ịkwatu mgbidi na dochie arịa ụlọ, anyị na -ekwu maka obere mgbanwe ịchọ mma nke na -etinyeghị nnukwu ego yana na anyị nwere ike ime ka anyị ghara ịbụ ndị nwe ya.
1 Na -emegharị mgbidi ahụ
2 Gbanwee anya kabinet
3 Ọ naghị amasị gị tebụl tebụl?
4 Lekọta ọkụ
Na -emegharị mgbidi ahụ
Kichin agaghị adị mma ma ọ bụrụ na mgbidi ya adịghị ọcha ma ọ bụ na ọ nweghị ụcha nke masịrị gị. Yabụ na nzọụkwụ mbụ ga -abụ idozi nsogbu a na na -eji mkpuchi agba na -edozi mgbidi ahụ. Ọ bụrụ n'ịkwaga na onye nwe ya ma ọ bụ rịọ, ọ gaghị efu gị nnukwu ego iji tee ha na agba mbụ.
Ị nwekwara ike megharịa mgbidi site na iji ihe nrapado. Enwere ohere na -adịghị agwụ agwụ na ọtụtụ enwere ike iwepu ya mere ha agaghị anọchite anya isi iyi nke esemokwu na ndị nwe ya. Taịlị kichin n'ihu nrapado na -eme ka ọ dị mfe ịgbanwe kichin nke ụlọ mgbazinye. Mana ị nwekwara ike iji vinyl mepụta mgbidi ụda olu, nke na -adọta uche ma na -eduzi uche nke ndị ọbịa n'otu akụkụ.
Gbanwee anya kabinet
Ngwongwo kichin nwere nnukwu ibu na kichin. Ọ na -esiri gị ike ịme nke a ma ọ bụrụ na ị kpọrọ ụlọ mkpuchi asị. Ihe ngwọta kacha mma iji gbanwee ọdịdị ya, ma ọ bụrụ na onye nwe ya kwere ya, bụ gbanwee ha agba. Nsonaazụ ga -eju gị anya. Ọ ga -adị ka ị gbanwere arịa ụlọ.
Onye nwe ya agaghị ekwe ka ị tee ha? Ọ bụrụ na kabinet nọ n'ọnọdụ adịghị mma ma ọ bụ na ịnweghị ike ịcha ha wepu ọnụ ụzọ kabinet elu ọ ga -eme ka oghere gbanwee kpamkpam. Ọ bụkwa ezigbo ihe ngwọta iji mee ka kichin ndị kabinet juru na ya dị mfe. Naanị ihe ị ga -eme bụ idobe ibo ụzọ n'ime kaboodu ruo mgbe ị ga -apụ.
Ọ bụ naanị na ọ bụ naanị iwepụ ọnụ ụzọ? Wepụ kabinet dị n'elu were ụfọdụ shelves dochie ha. Ị ga -enwe ike idobe ha efere, iko na ihe ndị ahụ ị na -ejikarị esi nri na ite iko. Kichin ga -adị ka nnukwu ma ọ bụrụ na i juputaghị na shelf ma mara ka esi edobe ya n'usoro. Ha ga -enyefekwa ụfọdụ osisi -potos ma ọ bụ marantas- ma si otú a nye ụlọ ahụ mmetụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ma ọ bụrụ na ịkwaga, ịnwere ike ịkpọrọ gị ma jiri ha mee ụlọ ọzọ.
Ọ naghị amasị gị tebụl tebụl?
Ịgbanwe kichin nke ụlọ maka mgbazinye site na ịkụ nzọ na mgbanwe ndị anyị tụpụtara nwere ike zuo ma ọ bụrụ na tebụl tebụl emebi ihe niile. Jiri akwụkwọ nrapado Ọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ụzọ kachasị ọnụ ala iji dozie nsogbu a, mana ọ bara uru? Ọ nwere ike bụrụ ma ọ bụrụ na n'akụkụ kichin ị ga -etinye mbadamba osisi na tebụl na -enye gị ohere, na mgbakwunye na ịkwadebe ihe ndị dị na ya, idobe ite dị ọkụ n'emebighị tebụl ahụ.
Ọ bụghị azịza zuru oke mana ọ bụrụ na ndị nwe gị achọghị ka ị mee mgbanwe ọ bụla na -agaghị atụgharịgharị, ọ bụ naanị ohere gị. Ọ bụrụ na ị nwere aka efu, n'aka nke ọzọ, ezigbo bụ were agba pụrụ iche tee ya. Chọpụta na ụlọ ahịa ngwaike dị na mpaghara gị ụdị ụdị agba kacha dabara adaba dabere na ihe dị na tebụl.
Ị nweghị ike ịhe echiche ka oghere si agbanwe site na ezigbo ọkụ na oriọna mara mma. Gbanwee ọkụ elu ụlọ ochie maka chandeliers ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ ugbu a. Lekọta ọkụ ahụ ma kichin gị ga -adị ka nke ọzọ.
Na -achọ inweta otu mmetụta ahụ n'ime ime ụlọ ịwụ? Soro ndụmọdụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Atụmatụ 4 iji gbanwee kichin nke ụlọ maka mgbazinye
Ihe ị ga -ahụ ma ọ bụrụ na -amasị gị 'Egwuregwu Squid'